Ọ bụ-ahụ kwuru na video nakwa dị ka ihuenyo ndekọ bụ a arụmọrụ na a chọrọ site kpọmkwem ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma e si echiche na onye ọrụ ọkọkpọhi ndị kasị mma na ọkaibe results enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke omume na a ga-atụle n'isiokwu na-a nkuzi bụ ndị na-na-ma na-akwụ ụgwọ na free mere na onye ọrụ nwere ike họrọ onye dị ka kwa ọchịchọ na mkpa na pụkwara ijide n'aka na ebudatara omume na-eji optimally.
Nkebi nke 1: Top 5 free ihuenyo ndekọ Software
Nkebi nke 2: Top 5 kasị mma ugwo ihuenyo ndekọ Software
Nke a na ngalaba nke nkuzi na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe mmemme na-n'efu na arụmọrụ bụ ihe na-erughị ihe ọ bụla na-akwụ ụgwọ omume na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na functionalities nakwa dị ka n'ozuzu atụmatụ na e kọwara na nke ngalaba na-atụle zuru iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta na usoro ihe omume na suut mkpa ebudatara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
1. Obere Were
Ọ bụ ihe kasị mma omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi mfe interface na na metụtara functionalities na e agbakwunyere bụ ndị na-bụ ndị kasị mma na n'agbanyeghị nke ịbụ free ndị a emelite mgbe nile iji jide n'aka na onye ọrụ na-anọgide na akara na nke ugbu a chọrọ na-eji usoro ihe omume na ala.
2. S edekọ
The wuru na functionalities ndị kasị mma na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume na-abụghị nanị ebudatara ma na-eji n'efu ma atụmatụ na e agbakwunyere n'ime ya bụ ndị na-bụ ndị kasị mma na-ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na usoro ihe omume ebudatara n'ihi na n'aka.
3. ihuenyo Nr
Usoro ihe omume na-eme ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe arụmọrụ ebudatara na-eji n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ optimally eji na enyemaka nke ndị na-eduzi na-agụ m txt faịlụ na ebudatara na usoro ihe omume.
Smart Pixel e mepụtara nanị iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ na-agbakwunyere n'ime. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ ibudatara na ukara website dị ka ọ bụ na-adịbeghị anya version na e emelitere na iji jide n'aka na ihe kasị mma ẹka nke onu onye ọrụ kwesịrị nwalee omume mbụ.
Dị ka usoro ihe omume e mepụtara iji kacha mma aka nke ụlọ ọrụ otú ahụ pụta dị na akara na onye ọrụ chọrọ na na aka nke ọzọ onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na omume na-eji jide n'aka na chinchi ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-mata na- kọrọ iji jide n'aka na ihe kasị mma emelitere version na ulo oru.
Na-esonụ bụ n'elu 4 ugwo ihuenyo akada omume na naanị ike ebudatara ma wụnye Ozugbo azụmahịa ikike e nwetara.
1. Fast nkume kpọọ
Ọ bụ usoro ihe omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na onye ọ bụla na ihe ọ bụla penny na e nọrọ na nke a bụ ziri ezi ka a oké ịgbatị. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ime ka zuo si URL n'elu zere ihe ọ bụla mishap.
2. Wondershare ihuenyo teepu
Ọ bụ ihe kasị mma na omume nke e depụtara iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere onye ọrụ na onye ha na-anọgide na-enwe obi ụtọ na afọ ojuju. N'adịghị ka ndị ọzọ omume nke yiri genre onye a na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na mkpokọta nke nke video akada na ihuenyo ndekọ na-kpebiri na enyemaka nke kasị mma na ndị ọkaibe omume na nke a. Iji nweta ihe kasị mma nke usoro ihe omume ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nduzi na e uploaded site na mmepe na URL kwuru n'elu na-agụ ma na-ekpe ikpe version ebudatara na-adịghị awa site ọ bụla ọzọ omume na e depụtara na nke a.
Wondershare Video Convertor Ultimate abịa na video edekọ na a na usoro a na-akpaghị aka arụnyere na isi software. Wondershare Video Convertor Ultimate bụ ihe kasị mma na ọkaibe omume nke na-eme n'aka na video ngwọta na-nyere nile na otu na egwu na ọkaibe ahụmahụ na mmekọrita video converting, nbudata, ọkụ ma na-enuga TV na-nyere . Nke a na usoro nwekwara akwado ndị Kacha ọhụrụ 4K na HD technology. The video reorder Nwela arụnyere na isi omume ie Wondershare Video convertor kacha ya mere ọ dịghị mkpa nke itinye usoro ihe omume aka.
Kụziri site na ike nke Sony a usoro na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a na-akawanye-arụ ọrụ mere na ụdị na klas. Nke a na usoro e nanị mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpokọta onu ẹka na-esonụ larịị enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Iji nweta nsonaazụ kacha mma na n'ihu na-eme ka a zụọ ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ reviews na-atụle.
N'adịghị ka ndị ọzọ omume a software abịa na a nloghachi policyas ọma na comprises nke 15 ụbọchị na omume nwere ike laghachiri bụrụ na onye ọrụ bụghị afọ ojuju. Ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe arụmọrụ na e agbakwunyere na onye ọrụ nwere ike inweta ihe kasị mma ma ọ bụrụ na ntuziaka na-soro ndị na-abịa na usoro ihe omume.
Nke a na usoro na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ na-pacified na nke kacha mma na ọkaibe format akakabarede na-mere Ọzọkwa. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ na-amụ ma na-anwale tupu ya na-aha iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere n'ime chaachaa na onye ọrụ na-anọgide pacified na nke a.
> Resource> Record> Top 5 free na mma ihuenyo ndekọ Software